Dr. Tint Swe Medical and Knowledge Writings
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်မှာနေနေ ကျန်းမာစေရမည်
ဗုံး ဖုံး ဘုန်း ဖုန်း ဘုံး
ဖုန်း နှင့် ဘုန်း အနက်အဓိပ္ပာယ် ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲ ကျွန်တော့ကို မေးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဗုံး ဗုံးကြဲ ဗုံးဆံ ဗုံးပေါလအော ဗုံးခိုကျင်း ဗုံးလက်နက် လက်ပစ်ဗုံး အနုမြူဗုံး (အဏုမြူဗုံး) ဗုံးချ ဖုံး စပါးဖုံး ပိတ်ဖုံးသည် ဖုံးကွယ် ဖုံးတုန်းလုံးတုန်း ဖုံးထားသည် ဖုံးပိတ်သည် ဖုံးဖုံးဖိဖိ ဖုံးဖွက် = စလောင်းဖုံး ဖုံးမသိန်ပင် ဖုံးလျက်ရှိသည် ဖုံးလျက်နေသည် ဖုံးလွှမ်းပိတ်ဖုံး ဖုံးဝှက် ဖုံးအုပ်သည် မခင်ဖုံး မိုးဖုံး မီးဖုံး မပေါ်အောင်ဖုံး ယွန်းပြည်မိုင်းဖုံး မြို့ဆင်ခြေဖုံး ရင်ဖုံးအကျႌ လုံစွာဖုံး သွားဖုံး အကျႌရင်ဖုံး အခွံဖုံး အရောင်ဖုံး ဆေးငဖုံးပင် မြေထဲမြို့ နှုတ်ဖျားတာဖုံး ဖုန်း ဖုန်းငရဲ = ငရဲဘေးသင့်သည် ဖုန်းစား = ဖုန်းတောင်း = တောင်းစားသူ ဖုန်းစားခွက် ဖုန်းဆိုး = ရွာကုန်း လယမြေယာအဟောင်း ဖုန်းဆိုးထသည် ဖုန်းဆိုးကြံပင် ဖုန်းဆိုးရွာပျက် ဖုန်းဆိုးတော ဖုန်းဖုန်းကျသည် (စာမေးပွဲ) ဖုန်းဖုန်းပစ်ချ ဖုန်းတောင်းယားစကာ (တောင်းစားသူ) သူဖုန်းစား (တောင်းစားသူ) ဘုန်း ဘုန်းညွန့်မပွါး = ကောင်းမှုကုသိုလ်မပွါး (ပျို့) ဘုန်းတန်ခိုး ဘုန်းကြီးသောသူ ဘုန်းသမ္ဘာ ဘုန်းတော်ကြီး ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ဘုန်းတော်ရှိန် ဘုန်းတော်တောက်ရွှန်း ဘုန်းတော်ထ
လေးနှစ်တိတိက ရန်ကုန်မှာ ပိတောက်ပန်းကို ၂၈ နှစ်အကြာမှာ မျက်ဝါးထင်ထင် ပြန်မြင်ခဲ့ရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်မမြင်ရတာလည်း ၄ နှစ်တိတိ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၅-၂၀၁၈ ၁-၅-၂၀၂၂
၁။ မုန့် နဲ့ မုံ့ ရဲ့ ကွာခြားပုံလေးကို ကျေးဇူးပြု၍ ခွဲခြားပြသပေးပါခင်ဗျ။ အများရေးတာတွေ့နေရတာကတော့ မုန့် လို့အများဆုံးတွေ့ရလို့ပါ။သိမှတ်စရာကောင်းနေပါတယ်ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ၂။ မုန့် လို့သာ သင်ခဲ့ရလို့ပါ ဆရာ ၃။ အခုမှ သိတယ် ဆရာ ကျေးဇူးပါ ဆရာ တသက်လုံး အမှား အမှန် ပြင်ရပြီ ၄။ ကျနော်လည်း မုန့် က အမှန်ထင်နေတာ မဟုတ်ဘူးလားဗျ။ ၅။ မုန့်ဖက်ထုပ် ဘာဟာက အမှန်လဲ ဆရာ။ ၆။ မုံ့ လား မုန့် လား။ ၇။ မုံ့ဆိုတာ သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ မုန့်မှတ်နေတာဆရာ မြန်မာစာသတ်ပုံမှာ မုန့်လို့ မရှိခဲ့ပါ။ အစီအစဉ်မှာ မုံ - မုံ့ - မုံး - မုန် - မုန်း -မိုး - မိုရ် - မို့ - မိုး - မိုဃ်း လို့သာရှိတယ်။ ကဝိဓဇသတ်ပုံကျမ်းမှာ မုံ့ = စားသောမုံ့၊ မုံ့မျိုးစုံလို့ရေးတယ်။ ဧကန်သာတမုံ့၊ နေသည်တမုံ့၊ ပြုသည်တမုံ့တွေကတော့ အသုံးနည်းလာတဲ့စာလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထုတ်သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ မုန့် လို့သာတွေ့နိုင်ကြပါမယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ မုံ့ လို့သာသုံးပါတယ်။ မုံ့ဖက်ထုပ်၊ မုံ့ဆန်း၊ မုံ့စိမ်းပေါင်း၊ မုံ့လေပွေ၊ မုံ့ဗိုင်းတောင့်၊ ဘီးမုံ့၊ ပဲမုံ့၊ မုံ့ဖက်လိပ်၊ မုံ့ကြာလိပ်၊ မုံ့ကတော့၊ ငှက်ပျောမုံ့၊ ကောက်လန်းတီမုံ့၊ ထန်းသီးမုံ့၊ ကတတ်မုံ့၊ မုံ့ကတိုးဖွာ၊ မုံ့
ကွန်မင့်မှာ လာတင်တဲ့ အရုပ်တွေကို လိုက်ဖျက်ရတာ နေ့စဉ် မနက် ည လုပ်ရတယ်။ တယောက်က စာပြန်တယ်။ ကျွန်တော်က ရှွေဘုံသာလမ်းက ့့့ ဆေးခန်းပိုင်ရှင်ပါဆရာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ဟုတ်။ ကျေးဇူး။ နေကောင်းပါစေ။ တချို့က ဖေ့စ်ဘွတ်သာသုံးပြီး မင်စင်ဂျာကို မဖွင့်ကြ။ အရုပ်တွေလာလို့ ဖွင့်တော့ အရင်ကလည်း လက်နဲ့စာမရေးအားရင် အရုပ်တွေလည်း မပို့ပါရန်စာ ရေးထားပြီးသား။ တချို့လည်း ပြောထားတာသိပေမဲ့ ထပ်ပို့ကြတယ်။ ကျွန်တော့မှာ အာဏာမရှိ။ ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးသတင်း မနေ့ကတင်တာ Aye Aye San လုပ်ပြန်ပြီ ! လို့ရေးတဲ့သူကိုတော့ ဘလော့လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာ အာဏာတမတ်သားလောက်ရှိ၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၅-၂၀၂၀
တရံရောခါ၊ တနေ့မှာ၌၊ ဥစ္စာကြွယ်ဖြီး၊ သဌေးကြီးသည်၊ သ္မီးရတနာ၊ စောဥမ္မာကို။ အိမ်ရာထောင်လောက်၊ အရွယ်ရောက်၍့၊ ချင့်ထောက်မျှော်က ၊ ငါးပါးစသည်၊ မိဘတို့ဝတ်၊ တရားမြတ်ဖြင့်၊ မချွတ်စေမူ၊ ခင်ပွန်းပြုဖို့၊ ကြည့်ရှုလတ်သော်၊ ဥမ္မာဒန္တီပျို့ကို မဟာမင်းလှခေါင်ကျော်က ရေးသားခဲ့ပြီး ဦးတင်နှင့် ဦးဘိုးဖြူတို့က ကြီးကြပ်ပြင်ဆင်တယ်။ ဦးသိန်းဟန် (ဇော်ဂျီ) အမှာစာရေးသားပြီး ဦးဝန် (မင်းသုဝဏ်) က ခက်ဆစ်ဖြေတယ်။ စာအုပ်ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတယ်။ ၁၉၆၄-၆၅ ခုနှစ်က တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (၁၀ တန်း) စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ ကျောင်းသုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခေတ်က မြန်မာစာအရေးအသားဟာ ဥမ္မာဒန္တီလို ချောလှခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Six amazing beauty benefits of Neem တမာရဲ့ဆေးစွမ်းကောင်း (၆) မျိုး
(၁) Treating Skin Infections အရေပြားနာများ တမာရွက်ကို နူးသွားအောင်ပြုတ်ပါ။ ပြုတ်ရည်ကအစိမ်းရောင်ဖြစ်လာမယ်။ အရွက်တွေအရောင်ပြောင်းလာမယ်။ ပြုတ်ရေကို ဆေးအဖြစ်လိမ်းပါ။ ရေချိုးရေထဲလဲထည့်သုံးပါ။ (၂) Addressing Acne Problems ဝက်ခြံ တမာရွက် ပြုတ်ရည်ကို ဂွမ်းစလေးနဲ့ ဝက်ခြံပေါ်လိမ်းပေးပါ။ (တမာ+သခွါးသီး) နဲ့ (တမာ+ရောဂတ်) တွေကို မျက်နှာမှာ ကပ်နိုင်တယ်။ (၃) Used as Skin Toner အရေပြားတင်းဆေး တမာရွက် ပြုတ်ရည်ကို မျက်နှာအရေးအကြောင်းတွေထင်နေတာ သက်သာစေမယ်။ ငယ်ရုပ်ဆင်စေမယ်။ ဝက်ခြံအမာရွတ် ထင်နေတာ သက်သာစေမယ်။ (တမာ+နှင်းဆီ) ကိုမျက်နှာမှာကပ်နိုင်တယ်။ ပြီးရင်မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ။ (၄) Remedy for Dry Skin အရေပြားခြောက်နေရင် တမာမှုံ့ထဲမှာ စပျစ်စေ့ဆီနဲ့ရောပြီး မျက်နှာကို ညီညီညာညာလိမ်းပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာရင် ရေအေးနဲ့မျက်နှာသစ်ပါ။ (၅) Cure for Skin Pores အရေပြားအပေါက်များ ဝက်ခြံခေါင်းမဲကနေ ကျန်ရစ်တဲ့အပေါက်တွေကို သက်သာစေမယ်။ (တမာရွက် + လိမ်မော်ခွံ) ရောထောင်းပါ၊ (ပျားရည် + ရောဂတ် + ပဲပုပ်ဆီ) နဲနဲစီရောပါ၊ တပါတ် ၃ ကြိမ်လိမ်းပါ။ တမာဆီလဲသုံးနိုင်တယ်။ (၆) Takes care of Hair Troubles ဆံပင် ဆံပင်ပေါက်သန်စေမယ်။ တမာဆီကို ဘောက်၊ မှ
မန်ကျည်းရွက် - ၅၀၀ ကျပ်ဖိုးခန့် (တပန်းကန်စာ) တင်ထားတာကို သတ်ပုံတော့ပြင်လိုက်တယ်။ အမှန်ရော ပြင်စရာတွေပါ ပါတယ်။ ၅၀၀ ကျပ်ဆိုတာ သတ်ပုံမှန်ခေတ်က ထီပေါက်သူ အနိမ့်ဆုံးဆုနဲ့ ညီမျှတယ်။ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိတဦးက တလမှာ ၄၅၀ ကျပ်သာရတယ်။ လက်ဖက်ရည်တခွက် တမတ်ကို တမတ်လို့ မှန်အောင်ရေးသားကြတဲ့ခေတ်က။ မန်ကျည်းရွက်ကတော့ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ အရင်ကလည်းကောင်း၊ အခုလည်း စားရသူတွေ ကောင်းမှာပါ။ ၄၅၀ စားတော့ မပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အဆစ်တွေ အသုံးပြုရဖန်များရာက ရောင်ခြင်း နာခြင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းက ကောင်းစေမယ် New draft guidelines https://www.nice.org.uk/guidance/gid-ng10127/documents/draft-guideline ဗြိတိန်နိုင်ငံ National Health Service (NHS) ကျန်းမာရေးဌာနကနေ လမ်းညွှန်သစ် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
စန္ဒရားလှမြင့်ဝင်း - စန္ဒရားလှထွဋ် အိပ်၍မပျော်သော ညတညသံသရာလည် လေသာပြတင်းနံဘေးဝယ် ဖွေရှာငေးမော ကြည့်နေစဉ်မယ် တိမ်လွှာတွေလည်း မည်းမည်းမှောင်ရီခြယ် အစွဲများ ခြောက်လှန့်နေသည်နယ် အသည်းများ ထိတ်ထိတ်ပါတယ်ကွယ် အိပ်မပျော်လေတိုင်း ရှေးဖြစ်နောက်ကြောင်းများရယ် တွေးတောမိတယ် သူ့အတွက်ဝေဒနာ အဖြေလည်းရှာရန်မလွယ် ပြန်လည်ကာ ဆန်းစစ်ကြစမြဲကွယ် စိတ်မသက်သာဖွယ် သြော်နှိပ်စက်ကြသည်မို့လည်း ဒိီလိုညများမှာ မတွေ့ပါရစေနဲ့ကွယ် စေတနာတွေကြွယ် ချစ်တယ် သို့သော်ငြားလည်းကွယ် အတိတ်ရယ်အကျဉ်းသား ယွင်းမှားလို့ ကိုယ့်အားနှိပ်စက်နေသည်မို့ကွယ် ရွှေအား ငယ်ငယ် မှောင်နဲ့မဲမဲ ဘာမှမသဲကွဲသော ညတညရဲ့ ဝိုးတဝါး ညည့်လယ်အိမ်မက်ဆိုးများသာ ဖြစ်ပါစေကွယ် စိတ္တဇညများ ကုန်ဆုံးလွန်မြောက်ပါစေကွယ် Sleeping pills အိပ်ဆေး https://dr-tint-swe.blogspot.com/2020/12/sleeping-pills.html ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ပဌမတွဲ။ ၁၉၈၉ ခု စတုတ္ထအကြိမ်ရိုက်နှိပ်တာ ဖြစ်တယ်။ လယ်တီဆရာတော်ကြီးက သတ်ပုံမှန်နဲ့သာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်မာတိကာ ၅၁။ ဝိပရိဏာမအနက်တခုသည် အနိစ္စလက္ခဏာရေးဖြစ်ကြောင်း ၅၄။ လက္ခဏာရေး ၃ ပါးတွင် တပါးပါး နေရာကျပြီးစီးခဲ့လျှင် ကြွင်းနှစ်ပါး အလိုလိုပြီးစီးကြောင်း ၅၈။ မရဏမူဟူသည်မှာ မိမိကိုယ်ခန္ဓာ တကောင်လုံး၌ မျက်တောင်တခတ်မျှ မလစ်လပ်စေဘဲ မရဏဘေးကပ်တိုက်၍ နေမှုဖြစ်ကြောင်း ၆၁။ အနိစ္စလက္ခဏာတခုကို ရူပက္ခန္ဓာတခု၌ ပိုင်နိုင်စွာ ထင်မြင်နိုင်လျှင် အနာဂါမိဖိုလ်တိုင်အောင် ဆိုက်ကြောင်း ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကံ စိတ် ဥတု အဟာရ အကြောင်းတရားလေးပါး ထောက်မတည်ရှိစေရန် ကြိုးပမ်းနေရှာတဲ့ခန္ဓာ။ အထက်တန်းထိ ကျောင်းနေဘက်ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က သူ့စာမှာ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရလို့ ရေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဆေးပညာစာတွေမှာ အဲဒီအကြောင်းခံလေးပါးကို မကြာမကြာ ကိုးကားလေ့ရှိပါတယ်။ တနေ့က လယ်တီဆရာတော်ကြီးရေးသားတဲ့ ဒီပနီပေါင်းချုပ်ကို ဖတ်တော့ ကျွန်တော့တင်ပြချက် လွဲနေတာ သိရတယ်။ ဥတုဆိုတာ ရာသီဥတု မဟုတ်ပါတဲ့။ ဥတုဆိုသည်ကား သီတတေဇော၊ ဥဏှတေဇော ဟူသော မီးဓာတ် နှစ်ပါးပေတည်း။ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရတွေဟာ ရုပ်ဖြစ်ကြောင်း တရား ၄ ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ ရောဂါဘယတွေနဲ့ ဆိုင်မယ်။ ရာသီဥတုနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေလည်း အမှန်တကယ် ရှိပါတယ်။ အခုလို နေအလွန်ပူချိန်မှာ ရောဂါတွေကတမျိုး။ မိုးတွေရွာပြန်ရင် တမျိုး။ နေကောင်းကြပါစေ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သန့်ရှင်းသော အဝတ်ကို ဝတ်ခြင်းအကြောင်း
၁။ မောင်ဘအေးသည် ပထမတန်း၌ စာသင်နေသည်။ ၂။ သူ့အမေသည် သူ့ကို နေ့စဉ် သန့်ရှင်းသော အကျႌကို ဝတ်စေ၏။ ၃။ သူ့မှာ ချည်လုံချည် လေးထည်နှင့် ပိုးလုံချည် တထည်ရှိ၏။ ၄။ သူသည် ပိုးလုံချည်ကို တခါတရံသာ ဝတ်သည်။ ၅။ အဝတ်ဟောင်းများကို သူ၏အစ်မ မမှန်က လျှော်ဖွပ်ပေးသည်။ သူ၏ဆံပင်ကိုလည်း ဖြီးပေးသည်။ ၆။ တနေ့သ၌ မောင်ဘချိုသည် ဤကဲ့သို့ ညစ်ပေနေသော အကျႌကို ဝတ်လာ၏။ ၇။ ဆရာ ကိုဘိုးမြက မောင်ဘချို ဤကဲ့သို့ ညစ်ပေသော အကျႌနှင့် ကျောင်းသို့ မလာပါနှင့်။ ယခု အိမ်သို့ပြန်၍ သန့်ရှင်းသော အကျႌကို လဲခဲ့ပါဟု ဆိုလေသည်။ ၈။ ထိုနေ့မှစ၍ ကျောင်းသားတိုင်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော အကျႌလုံချည်တို့ကို ဝတ်ဆင်ကြလေ၏။ လွန်ခဲ့သောခေတ်က ပထမတန်း ကျောင်းသုံး ဒေါင်းဖတ်စာထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖတ်ခဲ့ရပါသည်။ ယခုသော်ကား တထည်ကို တထည်ဟုလည်းကောင်း၊ တခါတရံကို တခါတရံဟုလည်းကောင်း၊ တနေ့သ၌ကို တနေ့သ၌ဟု လည်းကောင်း မရေးကြတော့ပါ။ ယခုခေတ်မြန်မာစာသည် စာထဲကမောင်ဘချိုကဲသို့ ဖြစ်နေပါတော့သည်။ စာရေးသားသူတိုင်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော အကျႌလုံချည်တို့ကို ဝတ်ဆင်ကြစေလိုပါသည်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁။ လက်ရှိဒီဆေးသောက်နေရတဲ့လူရှိရင် ဘာကင်ဆာအတွက်သောက်နေရတာလည်း တစ်ချက် (တချက်)ပြောပြီး လိုအပ်သူများအလှုခံလို့ရပါတယ်ရှင့် တစ်ယောက်တစ်ဗူး (တယောက်တဗူး)၂ ဗူးရှိပါတယ်ရှင့် USA made ပါ ၂။ ဆရာရှင့် Ox bile 500mg, digestive enzymes, betaine hcl pepsin, probiotic 30 billion, L glutamine 500mg အဲ့ဒီဆေးတွေရဲ့ benefit ကိုသိချင်တာပါရှင့် ဆေးတွေမှာ ဘာအာနိသင်တွေပါလည်း ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကို သိချင်တာပါရှင့် အသက် ၂၆ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်မရှိ ဝမ်းမှန်ပါတယ် ရာသီလည်းမှန်ပါတယ် နာတာရှည်လေနာရှိ Facebook ပေါ်မှာအဲ့ဒီဆေးတွေကလေနာ ပျောက်ကင်းတယ်လို့ဖတ်ရလို့ရှင့် Side effects ဖြစ်မှာလည်းကြောက်လို့ပါရှင့် Calcium ဆို အရိုးတွေကိုသန်မာစေတယ် အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး ဒီဆေးတွေကျ ဘယ်လိုအကျိုးအာနိသင်ရှိလဲဆိုတာကို သိချင်တာပါရှင့် Glutamine ဆေးဟာ ကြော်ငြာဆေးလို့ပြောရင်လည်းရတယ်။ ပရိုတင်းဓါတ်အတွက်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားလုပ်ပြီး သောက်ကြတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ဒီဆေးသောက်ရင် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတယ်။ ကြွက်သားကို တိုးစေတယ်။ အဆီကို သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ L-glutamine supplement ဖြည့်စွက်စာဆေးက လူကိုတော့ အန္တရာယ် မပေးပါ။ လူတိုင်းနဲ့
ပါဝင်ပစ္စည်းများကတော့ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက် ၃စည်း မျှင်ငါးပိထမင်းစားဇွန်း၁ဇွန်း ပုဇွန်ဘော့ချိတ် ၃၀သား ငရုတ်သီးစိမ်း ၅ကျပ်သား ကြက်သွန်နီ၂လုံးကြက်သွန်ဖြူ ၈မွှာ ဆီ ၅ကျပ်သား အချိုမှုန့်ဆားတို့လိုပါတယ် ပထမဆုံးဆီအိုးတည်ပါ ဆီပူလာရင် ကြက်သွန်ဖြူနီထောင်းထားတာထည့်ပါ နနွင်းထည့်ပါ ငရုတ်ပုဆီသပ်ထားတာထည့်မွှေပါ။ အစိမ်းနံ့ပျောက်သွားရင် ပုဇွန်ထည့်မွှေပါ ၁မိခန့်ကြာရင် ငရုတ်သီးစိမ်းကြိတ်ထားတာ ထည့်မွှေပါ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက် နွှင်ထားတာထည့်မွှေပါ ငါးပိစိမ်းစားရေဖျော်ထည့်ပါ ငါးငံပြာရည်ထမင်းစားဇွန်းနဲ့တဇွန်းထည့်ပါ အပေါ့အငန်စိတ်ကြိုက်ထည့်ပါ ၂မိနစ်ခန့်ထားပေးပြီးရင်တော့ အရည်စပ်စပ်လေးနဲ့ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ကြော်ချဉ်ချဉ်ငန်ငန်စပ်စပ်လေးကို ထမင်းပူပူလေးနဲ့ ထည့်ကျွေးလို့ရပါပြီ (KyiKyi Ppk) တဇွန်းထည့်ပါ ရေးတာမှန်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ စားကောင်းမည်။ ငရုတ်ပုလို့ ဟင်းတိုင်းလိုလိုမှာပါ၊ လူတိုင်းက ရေးနေကြတယ်။ ဘယ်လောက် အရပ်ပုသလဲ မသိ။ ပုံထဲကငရုတ်သီးကတော့ အမေရိကန် စံကိုက်အရပ်ပါဘဲ။ ကလားအော်သီးကြက်သွန်ဖြူထောင်း ကလားအော်သီး ၅တောင့် ကြက်သွန်ဖြူ ၁၀မွှာတို့ကို လှော်ထားပါ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ထမင်းစားဇွန်း ၁ဇွန်း သံပုရာသီး ၂လုံးအရည်ညှစ်ထားပါ ဆား
တောင်တောရယ်သာ၊ မာလာကငုံဖူး။ တပင်ကို နှစ်ပင်ယှက်တယ်၊ ကျေးငှက်ကမြူး။ ခုခေတ် တစ်ကသိုလ်တွေကတော့ တပင်ကို တပင်လို့ မရေး၊ တကွက်ကို တကွက်လို့ မရေးတတ်ကြပါ။ အဲလိုမရေးတဲ့စာအုပ်တွေက ရောင်းကောင်းတယ်။ တစ်ပင်ကို နှစ်ပင်ယှက်တယ်၊ စျေးကွက်က မြူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Popliteal Cyst ဒူးထဲက အရည်အိတ်
မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ ဒူးခေါင်းအောက်ဘက်အကွေးအဆန့်နေရာမှာ Popliteal cyst ခေါ်တဲ့အရည်အိတ်ဖြစ်တဲ့ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းညွှန်မှုပေးစေချင်ပါတယ်ကူညီတောင်းရခြင်းပါခင်ဗျ ဆရာဝန်ကို မေးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ Baker's cyst လို့လည်း ခေါ်တယ်။ ဒူးကောက်ကွေးထဲမှာ အရည်အောင်းနေတဲ့အိတ်ဖြစ်တာ။ အကွေးအဆန့် လုပ်တိုင်း နာမယ်။ ဖြစ်စမှာ မနာသေးဘူး။ လက်နဲ့စမ်းရင်ရနိုင်တယ်။ ပေါက်ထွက်တယ်ဆိုတာ အလွန်ရှားပါတယ်။ Ultrasound အာထွာဆောင်း X-ray ဓါတ်မှန်နဲ့ Magnetic resonance imaging (MRI) ရိုက်ရင် သေချာသိမယ်။ Arthritis အဆစ်ရောင်တာ သို့မဟုတ် cartilage tear အရိုးနုစုတ်ပြဲတာကနေ ဆက်ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းခံကို ကုသရပါမယ်။ တချို့ အလိုလိုပျောက်တယ်။ လိုတဲ့သူ ဆေးကုသမှုခံယူရမယ်။ corticosteroid (cortisone) ဒူးနေရာကို ဆေးထိုးခြင်း။ ယာယီရောင်တာ နာတာ သက်သာစေမယ်။ Fluid drainage အရည်စုပ်ထုတ်ခြင်း။ Physical therapy ဖစ်ဇီကယ်သာရာပီနည်းကုသခြင်း Icing ရေခဲတင်ပေးခြင်း။ Surgical intervention ခွဲစိတ်ရတာ ရှားပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဂျင်တလုံး လိုချင်သည်။ ကျင်းတခု တူးနေသည်။ ဖျဉ်းအိုး တလုံး ယူခဲ့။ ချည်ခင် တခု ပေးပါ။ သတ်ပုံမှန်မြန်မာစာ ကျင်းထဲကျသွားသည်။ ပြန်မတက်နိုင်စွမ်း မရှိသေးပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ရတန ပါဠိစာလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ရတန = ကျောက်မြက်။ ရတန = ရတနာ။ ရတန = တတောင်ဟူသော အတိုင်းအရှည်။ (တစ်တောင် မဟုတ်ပါ။) ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျနော့အဖေက သျှမ်းတယောက် - သျှမ်း ဆိုတဲ့အတိုင်း သူ့လက်နှစ်ဖက် သူ့ကျောကုန်းမှာ သျှမ်းစာတတ်တူးတွေအပြည့်။ သူ့ညာဘက်လက်ဖမိုးမှာ ကျားခေါင်းရုပ် ထိုးထားတယ်။ (SNLD ခေါင်းဆောင် ခွန်ထွန်းဦး၏ သား Hkun Oo Lwin ရေးသားပါတယ်) ခွန်ထွန်းဦး၏သား သည်လည်းကောင်း၊ သီချင်းရေးတဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ်သည်လည်းကောင်း မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာရေးသားတတ်သူများဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ရှမ်းဆရာဝန်တယောက်ကလည်း စောင်းတီးတာ သတ်ပုံမှန်ကန်၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
- ရွှေဆံထိုး တခု - ရေမွှေး တပုလင်း - သည်တပွဲ နွှဲပါဦး ဟု ရေးသားကြ၏။ - မြန်မာစာဂရုကြီးများကမူ Chanel #5 ရေမွှေးတပုလင်းလို့ရေးတာကို နံသည်ဟု ဆိုကြ၏။ - စာရေးဆရာများကမူ Calvin Klein ရေမွှေးတပုလင်းလို့ရေးတာကို နံသည်ဟု ဆိုကြ၏။ - ကဗျာဆရာများကမူ Ralph Lauren ရေမွှေးတပုလင်းလို့ရေးတာကို နံသည်ဟု ဆိုကြ၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လူငယ်များသည် ရေကန်တကန်အနီး၌ ကစားကာနေကြ၏။ လူကြီးများသည် ရေကန်တစ်ကန်အနီး၌ဟု စာရေးသားကာနေကြ၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဒူးရင်းသီး ဘုရားဆွမ်းတော်တင်ထားတာနဲ့ ကွန်မင့်တခုလည်း ဖတ်ရတယ်။ ဒါယကာမကြီး ဒူးရင်းသီးကို အခွံလေးသင်ပီး (ပြီး) ကပ်ရင် ဘုန်းပေးရတာ အဆင်ပြေတာပေါ့ ခုတော့ တဲ့။ ကျွန်တော် ဘုရားစင်ပုံတင်တိုင်း စင်မဟုတ် ဘုရားကျောင်းဆောင်လို့ရေးခိုင်းသူတွေ အတော်များတယ်။ မြတ်စွာဘုရားဟာ တောမှာမွေ့ပျော်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လုမ္ဗိနီအင်ကြင်းဥယျာဉ်မှာ ဖွားတော်မူတယ်။ ဥရုဝေလတောမှာ တောထွက်တယ်။ ညောင်ပင်အောက်မှာ ဘုရားဖြစ်တယ်။ မိဂဒါဝန်တောမှာ တရားဦး ဟောတယ်။ ပလလဲတောထဲမှာ တဝါဆိုဘူးတယ်။ သရက်ဥယျာဉ်တွေမှာ တရားတွေဟောတယ်။ ပရိနိဗ္ဗန်စံတော့လည်း ကုသိနာရုံမြို့မှာ မဟုတ်။ မလ္လာမင်းတို့ရဲ့ အင်ကြင်းတောမှာဖြစ်တယ်။ တချို့ကလည်း ဆွမ်းတော်က နည်းနည်းလေးတဲ့။ မြတ်စွာဘုရား ဆွမ်းပမဏာမဘယ်လောက် ဘုန်းပေးသလဲ မသိ။ ၄၅ လုပ်လို့ လူရွှင်တော်တွေပြောတာ ကြားဘူးတယ်။ တချိုကလည်း ဇွန်း ခက်ရင်းမပါဘူးလားတဲ့။ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်တုန်းက ပေါ်ပြီလား မသိ။ ဆွမ်းအုပ် အဖုံးဖွင့်ထားတဲ့။ ယင်ကောင်။ လက်ဆေးရေတဲ့။ လက်သုတ်တဲ့။ တစ်ရှူးခေတ်မဟုတ်လား။ ခေတ်ဆန်သူတွေက များများလာတယ်။ မာလာအမည်ပါတဲ့ဟင်း၊ ထောင်းနဲ့ သောက်ဆမ်းအမည်ပါတဲ့ဟင်းတဲ့။ အစပ်ဆိုတာ ငရုတ်ပုတမျိုးတည်းရှိသလားမသိ။ အရောင်ပါ ကန်စ
ငှ ဌ ဋ္ဌ
၁။ ဌက်ပျောပင်က အမှန်လား ဌက်ပျောပင်က အမှန်လားဗျ ဆရာ (ငှက်ပျောပင်) ၂။ မိသားစု private သီးသန့် ခရီးသွားလိုသူများအတွက် လေယာဉ်စင်းလုံးဌားပြီး သွားနိုင်ပါပြီ ဌား နဲ့ ငှား မှားရေးကြတာတွေ မကြာခဏတွေ့တယ်။ လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလို့ ရေးရတယ်။ လေယာဉ်စင်းလုံးထားပြီးလို့ ထင်စေနိုင်တယ်။ ၃။ ဘာရောဂါဖြစ်ဖြစ် ငှက်သိုက်ကြောငြာသူတွေက ဌက်သိုက် (ထက်သိုက်) လို့ ရေးကြတယ်။ မှားတယ်။ (ဟထိုး) ဆိုတာ စာလုံးအလယ်ကနေသာ အောက်ကို ဆွဲချရတယ်။ (ဌဝမ်းဘဲ) အက္ခရာက (င) အဆုံးကနေ တန်းဆွဲရတယ်။ (ဌက်သိုက်) က (ဋ္ဌက်သိုက်) နဲ့ (ဠက်သိုက်) ထက်တော့ တော်သေးတယ်။ ၄။ ပဋ္ဌာန်းရွတ်သူတွေကလည်း မှန်အောင်မရေးကြ။ ၅။ ပဌမလို့ရေးရင် အိုလံပစ်မှာ ရွှေတံဆိပ်ရသူလို့ မထင်ကြတယ်။ ငှက် ငှက်ကျား ငှက်စပ် ငှက်တိန်ညင်း ငှက်ကြီးတုံးစပ် ငှက်ကြီးဝန်ပို ငှက်ကြီးတောင်ဓါး ငှက်ပစ်တောင် ငှက်ဖျားရောဂါ ငှက်မြတ်နား ငှက်ချေးခံ ငှက်ပျောပင် ငှက်ပျောပပ် ငှက်ပျောဖက် ငှက်ပျောဖီးကြမ်း ငှက်ပျောဖူး ငှက်ခြောက်ရုပ် ငုတ် ငုတ်တုတ်ထိုင်သည် ငုတ်ရိုက်သည် ဘုရားငုတ်တို သစ်ငုတ် ငုပ် ငုပ်ပျောက်တိမ်ကော လက်ငုပ်လက်စ အစငုပ် အဓိပ္ပါယ်ငုပ် ခြေစွယ်ငုပ် ရေငုပ် သွေးလေငုပ် ငှန်း ကြငှန်း = အထွတ်အမြတ် ကြင
LOL ဆိုတာ ဘာလဲ
စောစောက တွေ့လိုက်တယ်။ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦး သတင်း။ တပွင့်ပြီးတပွင့်လို့ ရေးတာတော့ မှန်တယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ စာအဆုံးမှာ lol လို့တွေ့တယ်။ မှားနေတယ်။ LOL ဆိုတာ ဘာလဲ - Laugh Out Loud ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်သည်။ - Laugh audibly သို့မဟုတ် be amused လို့လည်း ဆိုတယ်။ အသံထွက်အောင်ရယ်သည်။ ပျော်ရွှင်စရာပဲ။ - League of Legends ကာတွန်း။ - Lots Of Love အချစ်များစွာဖြင့်လို့ ထင်တာ မှားတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အိမ်ရှင်မတွေ မနက်နိုးလာတာနဲ့ အိမ်အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကို အရင်လုပ်ရလဲ။ ရေနွေးအိုးတည်တယ်။ အိမ်က နိုးလာသူတွေက ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည် ရေနွေးကြမ်း စသည်ဖြင့် နိုးလာပြီဆို သောက်ကြတော့မှာကိုး။ ရေနွေးအိုး တည်နေတုန်း ထမင်းအိုးက မျက်စ ပစ်ပြတယ်။ ဟဲ့ ဆန်ဆေး လိုက်ပါတော့လား၊ ထမင်းအိုးတည်လေ တဲ့။ ထမင်းအိုး တည်ထားတုန်း အိမ်က လူတွေ မနက်စာအတွက် ဘာပြင်ဆင် ပေးရမလဲ စဉ်းစားတယ်။ ထမင်းကြမ်း ကျန်သေးရင်လည်း ဘဲဥလေး ဖောက်ထည့်ပြီး ထမင်းကြော် ပေးလိုက်မယ်ပေါ့။ ဘာမှ မရှိတော့လည်း အိမ်နားက မုန့်ဟင်းခါး ဆိုင်လေး အသုပ်ဆိုင်လေး အပေါ် အကျီလေးတထည် မြန်မြန် ကောက်စွပ်ပြီး သွားဝယ်။ မုန့်ထုပ်ကလေးတွေ ဆွဲပြီး မြန်မြန်ပြန်လာ။ အိမ်ရောက်တော့ စားပွဲမှာ ရုံးသွား ကျောင်းသွားမယ့် သူတွေအတွက် အဆင်သင့် မနက်စာ ပြင်ပေးထား။ သားအတွက် သမီးအတွက် လင်အတွက်။ နောက်ဆုံးမှ ကိုယ့်အတွက်။ ထမင်းဘူးတွေ အတွက် ညက ချက်ပြီး ရေခဲ သေတ္တာထဲ ထည့်ထားတဲ့ ဟင်းတွေ ပြန်နွှေး။ ဟော သူတို့ နိုးလာတဲ့အခါ "အမေ သား မဝဘူး အသုပ်က နည်းတယ် ထပ်စားလို့ ရသေးလား" "အမေ့ မုန့်ဟင်းခါး ယူစားလိုက်" သမီးက "အမေ အမေ့ ပဲကြော်လေး နည်းနည်း ပေးပါလား" "အေး အေး ယူလိုက်
တင်ထားတာတခု တွေ့တယ်။ ရက္ခိုင်တို့၏ ဒဏ္ဌာရီဆန်သော ဒွါရာဝတီသံတွဲမြို့သမိုင်းကြောင်း ရခိုင်စာတော့ မသိပါ။ မြန်မာစာနဲ့ ပါဠိလိုဆိုရင် ဒဏ္ဍာရီလို့ ရေးပါတယ်။ ဖုန်းကနေ စာရိုက်ရတာလည်း တခါတခါအတော် အဆင်မပြေပါ။ ဒဏ် ဒဏ္ဍာရီ ဒဏ်ဆယ်ပါး ဒဏ်တပ်သည် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် ဒဏ်သင့်သည် ဒဏ်သည် ဒဏ္ဍသဒ္ဒါမှဆင်းသက်လာသည်။ ဒဏ်ပေးသည် ကြိုးဒဏ် ဗြဟ္မဒဏ် ရာဇဒဏ် ထောင်ဒဏ် သေဒဏ် ဒဏ္ဍာရီ = ဆုံးမသော ဝတ္တု ဒဏ္ဍာရီ။ ဒန္ဒာရီ = ယဉ်ကျေးသော ပုံ ဝတ္တု ဒန္ဒာရီ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မိုးတစိမ့်စိမ့်ရွာ (ဖြူသီ) https://www.youtube.com/watch?v=ZVdMuBQhCyc တသိမ့်သိမ့်သူ (စိုးစန္ဒာထွန်း) https://www.youtube.com/watch?v=8E3dP8Z4qCA မိုးတစိမ့်စိမ့်ရွာ သည် မိုး(တစ်)စိမ့်စိမ့်ရွာ မဟုတ်။ တသိမ့်သိမ့်သူ သည် (တစ်)သိမ့်သိမ့်သူ မဟုတ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁။ အဖေကိုဆေးရုံပို့လိုက်ပါပြီးရှင် အဆုတ်ထဲကရေကသိမ့်မများလို ဆေးနဲ့ခန်းအောင်လုပ်ပေးမယ်တဲ့ အဲလိုဆေးနဲ့ခန်းအောင်လုပ်လိုရလာရှင့်မသိလိုပါ ဆရာဝန်ကို မေးတာမဟုတ်ပါ။ စာပို့လိုက်မယ်။ Pleural effusion အဆုတ်အိတ်ထဲ အရည်အောင်းခြင်း https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/05/pleural-effusion.html ခန်းရေးတာ မှန်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ (သိပ်မများ) လို့ ရေးရတယ်။ (သိမ့်) ဆိုတာက အဓိပ္ပါယ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သိတ်(သိပ်)သဘောကျလို့ တင်လိုက်ပါတယ် ၃။ သိတ်(သိပ်)ကိုမျှော်လင့်ထားတာ စသဖြင့်ရေးတဲ့စာတခုတွေ့တယ်။ သိပ်ကိုလို့သာ ရေးသင့်တယ်။ သိတ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိသလောက် မြန်မာစာမှာမရှိပါ။ ၄။ နောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ ကျမတို့က သိတ်(သိပ်) မဖတ်ဖြစ်တော့ပါ။ ၅။ သိပ် နဲ့ သိတ် ဘယ်ဟာ အမှန်။ ၆။ သိတ်(သိပ်) ကြိုက်တဲ့သီချင်းပေါ့ဆရာရယ်။ သိပ် ဖိသိပ်ထားသည်၊ သိပ်သိပ်သည်းသည်း၊ ကလေးသိပ်နေသည်၊ သိုသိုသိပ်သိပ်၊ ဝင်သွားအောင် ဖိသိပ်ပါ၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသည်၊ သိပ္ပံဘာသာရပ်၊ ငပိသိပ်၊ ငချဉ်သိပ်၊ (ရှမ်းတွေက ဝါးလုံးခေါင်းထဲမှာ ငချဉ်သိပ်ကြတယ်။) မပြောဘဲ မျိုသိပ်ထားရတယ်။ သိပ်ဆိုးတဲ့ကောင်၊ သိပ္ပံပညာ။ သိပ်သည်းဆ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ သိပ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်။ တသိမ့်သ
Love Deeply ချစ်ကြိုက်လာပါတယ်
စာသမားတွေက မှတ်ချက်တွေပေးပြီး စာရေးဆရာများကို ချီးမွမ်းထောပနာပြုကြတာတွေ ဖတ်ရတယ်။ (က) ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်တော့ (အေ) ကို ချစ်လာတယ်တဲ့။ (ခ) ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်တော့ (ဘီ) ကို ကြိုက်လာတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း စာအုပ်တွေ ထောင်သောင်းဖတ်ခဲ့တယ်။ စာအုပ်တွေက အဟောင်းတွေ။ စာအုပ်သစ် အဖုံးတွေကို ဖတ်မိတော့ သတ်ပုံမှန်ခေတ်က မြန်မာစာကို ချစ်ကြိုက်လာပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Acne Scars ဝက်ခြံအမာရွတ်
၁။ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေရော ဘယ်လိုအမြန်ဆုံးပျောက်အောင် ကုမလဲဆရာ။ ယိုးဒယား beauty clinic မှာ စျေးကြီးပေးပြီး scrub သဘောမျိုးပေါ့။ အရေပြားကွာသွားရင် အမာရွတ်ပါ ပါသွားမယ်ဆိုလို့ လုပ်လိုက်တာ ဝက်ခြံညှစ်တံတွေနဲ့ညှစ်တာ အရေပြားကွာပေမဲ့ အမာရွတ်တွေ ပိုကျန်ခဲ့ပါတယ်ဆရာ။ ၂။ ဆရာ ဝက်ခြံပေါက်ပြီးရင် ချိုင့်တွေမကျန်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲဆရာ။ ရှိပြီးသားချိုင့်တွေ ပျောက်အောင်ရော ဘာလုပ်ရမလဲ။ ၃။ ကျွန်တော်က အသက်၂ဝ ရှိပါပြီ။ မျက်နှာမှာ အခုတလော အကွက်မည်းတွေထွက်နေပါတယ်။ နားလည်သလောက် အင်တာနက်မှာရှာကြည့်တော့ zits လို့ခေါ်မလား၊ acne scars လို့ခေါ်မလား မသိဘူးခင်ဗျ။ အသားတွေက တဖြည်းဖြည်း အစားခံရသလိုဖြစ်နေလို့ပါ။ တဖြည်းဖြည်းအသားထဲစိမ့်ဝင်လာသလို ဖြစ်နေတာပါ။ ဝက်ခြံလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ ကြာလာရင် ကျွန်တော့်မျက်နှာကြီး အပေါက်တွေနဲ့ဖြစ်တော့မှာ စိုးလို့ပါ။ ဒါကိုဘယ်လိုများ ကုသရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ဆိမ့်ဝင် နဲ့ ဆိုးလို့ပါ ဆိုတဲ့ ကနေ့ခေတ်လူငယ်တွေ အများကြီးမှားနေကြတဲ့ သတ်ပုံကိုတော့ အမာရွတ်ထင်သလို မကျန်ရစ်စေခြင်တာကို အရင်ရေးပါရစေ။ စ လုံးနဲ့သာရေးရပါတယ်။ စိမ့်ဝင် နဲ့ စိုးလို့။ ဝက်ခြံပေါက်ပြီး နီညိုရောင်အမာရွတ်က
တင်ထာတာတခု တွေ့တယ်။ အားနာနာနဲ့ ထောက်ပြပါရစေ။ ဆောရီး။ Single လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ချစ်သူရည်းစားမရှိတဲ့ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေလို့ အားလုံးက သိထားကြမှာပါ။ တကိုယ်တည်း ရှား၏။ (တစ်)ကိုယ်တည်း များ၏။ စေတနာရှင် အဖိုးအိုသည် တကိုယ်တည်းသာ စားသုံးပါရန် ခြုံကို ပြုစုနေခြင်း မဟုတ်။ သူကွယ်လွန်က ကျန်ခဲ့ကြမည့်၊ သားလှသမီး ဇနီး မြေး မြစ်၊ နှစ်ပေါင်းဆက်ဆက် မပျက်ထိန်းသိမ်း၊ စိမ်းလန်းခြံကျယ် သီးစုံကြွယ်အောင်၊ ဆောင်ရွက်စေရေး သိမြင် ပေးနေခြင်းမျှသာ။ ကိုယ်ကျိုးမဖက် နံနက်မှစ၊ အမှိုက်လဲရှင်း ခြံခင်းပြုပြင်၊ ရေစင်သွန်းလောင်း ကောင်းမြတ်စေတနာ၊ ဖိုးမေတ္တာကို သာဓုကြိမ်ကြိမ် ခေါ်မိတကား။ (မြန်အောင် ကျော်လွင်) မြန်အောင်နဲ့ မြန်ပြည်မှာ တကိုယ်တည်းသာ သတ်ပုံမမှန်ကြတော့တကား။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁။ ကျတော်နဲ့ ကထောင့်တောင့်တောင့် စကားပြောအတိုင်း ကျနော်လို့ရေးတာက ပြေပြစ်တယ် ထင်တာဘဲ ၂။ ကျနော် ကျမ ကျနုပ် တပြည်လုံး ကျွန်တော် ကျွန်တော်မ ဆိုတာကို မတော်လှန်သ၍ နောင်နှစ်မကြာခင်မှာ ကျွန်တခုခု ထပ်ဖြစ်ကြဦးမှာပဲ ကျွန်တော် ကျွန်မ ကျွန်နုပ် ဒါတွေကိုလည်း ယဉ်ကျေးလှပါတယ်လို့ မခံယူကြနဲ့ မကျင့်သုံးကြပါနဲ့ ကျွန်အဖြစ်က ရုန်းကြ ကျွန်ဇာတ်သွင်းခံထားရာက နိုးထကြ ကျွန်ဇာတ်ကို အဆက်မခံကြနဲ့ဟေ့ (ပို့ပေးတဲ့စာက ရှည်လို့ ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။ ဆောရီး) ၃။ ကျနော်လို့ပဲရေးပါတယ် ကျွန်တော်လို့ရေးရတာ မကြိုက်လို့ပါ။ ၄။ ကျမရဲ့ ဆရာတယောက်က မိန်းကလေးအနေနဲ့ ကျွန်မလို့မရေးနဲ့ ကျမလို့ ရေးဆိုပြီးပြောဖူးပါတယ်။ အရေးအသားအနေနဲ့ ကျွန်မဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောဘူးပါတယ်ရှင့်။ ၅။ ကျွန်ဇာက် (ဇာတ်)ကားကြောင့် ကျွန်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဘာကို ရည်ရွယ်၍ မေးရသလဲ ဆိုတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေတဲ့ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ ဆိုတာ အရင်ခေတ်က ကျွန်တွေကို ခေါ်လေသလား တွေ့မိလို့ပါဆရာ။ ၆။ ကျွန်တော်၊ ကျွန်ုပ်၊ ကျွန်မ အသုံးနှုန်းတွေကိုတော့ မှန်ပေမယ့် သက်ဦးဆံပိုင်ခေတ်၊ ကိုလိုနီခေတ်တွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက် ဘု
ကြည်အောင် မျှော်မှန်းသွားခဲ့တယ်။ ဒေါ်အမာက မှတ်တမ်းတင်သွားခဲ့တယ်။ ဦးဝင်းတင်က သိထားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အထပ်ထပ်အခါခါ တင်ပြထားတယ်။ ခုလူတွေက လမင်းတရာ မှားသတဲ့။ ဆောရီး ဆရာကြည်အောင်။ ဆောရီး ဦးဝင်းတင်။ ဆောရီး လူထုဒေါ်အမာ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၀-၄-၂၀၂၀ ပုံအတွက် ကျေးဇူး။
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလဟာ မြန်မာလို ၁၃၈၄ ခုနှစ် ကဆုန်လဆန်း (၁) ရက်နေ့ကနေ နယုန်လဆန်း (၂) ရက်နေ့အထိ ကျရောက်တယ်။ မေလလို့ နာမည်ရလာတာက ဂရိနတ်သမီး Maia (မိုင်ယာ) ဆိုတဲ့ မျိုးပွါးခြင်းနတ်သမီး ဖြစ်တယ်။ တိုက်ဆိုင်တာက မြန်မာ (၁၂) ရာသီခွင်ဟာ မေလနောက်ပိုင်းမှာ မေထုန်ရာသီဖြစ်နေတယ်။ မေလထဲကထူးခြားတဲ့နေ့များ မေလ (၁) ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံအမျိုးမျိုးမှာ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တွေအမျိုးမျိုး ကျင်းပကြတယ်။ မေလ (၁) = May Day (Labor Day; International Workers' Day) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားနေ့ မေလ (၃) = ပိုလန်နဲ့ ဂျပန် ဖွဲ့စည်းပုံနေ့။ မေလ (၃) = World Press Freedom Day ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့။ မေလ (၄) = ဒိန်းမတ် (နာဇီဂျာမဏီလက်အောက်က) လွတ်မြောက်ခြင်းနေ့။ မေလ (၅) = နယ်သာလင် (နာဇီဂျာမဏီလက်အောက်က) လွတ်မြောက်ခြင်းနေ့။ မေလ (၅) = ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယား ကလေးများနေ့။ မေလ (၅) = National Teacher Day အမျိုးသားဆရာနေ့ မေလ (၉) = Europe Day (အီးယူ) ဥရောပနေ့။ မေလ (၁၀) = မက်ဆီကို၊ ဂွာတီမာလာ၊ အယ်လ်ဆာဗာဒို အမေလနေ့။ မေလ (၁၀) = (ဒုတိယတနင်္ဂနွေ) အမေရိကန် အမေများနေ့။ မေလ (၁၃) = IEEE Global Engineering Day ကမ္ဘာ့အင်ဂျင်နီယာနေ့။ မေလ (၁၅) = Inte
ထိုတညက လာဖမ်းကြ၏။ ထိုတညမှစ၍ ကိုယ့်အိမ်မှာ မနေရတော့။ ထိုတညမှစ၍ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ မနေရတော့။ ထိုတညမှစ၍ ဒုတိယနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ၏။ ထိုတညမှစ၍ တတိယနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ၏။ ထိုတညက လသာနေ၏။ ထိုတညက လမင်းကို တိမ်ဖုံးနေ၏။ ထိုတညတိုင်းမှာ အပြောင်းအလဲများစွာ ဖြစ်နေပါ၏။ လူတိုင်းမှာ ထိုတညများစွာ ရှိကြပေ၏။ လသည် နေ့တိုင်းမသာနိုင်သကဲ့သို့ လကိုအမြဲအစဉ် ဖုံးထား၍မရချေ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
International Day of the Midwife နိုင်ငံတကာ သားဖွါးဆရာမများနေ့
နှစ်စဉ် မေလ (၅) နေ့ကို နိုင်ငံတကာသားဖွါး (ဝမ်းဆွဲ) ဆရာမများနေ့လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် ဆောင်ပုဒ်ကတော့ Women and Newborns: The Heart of Midwifery အမျိုးသမီးများနဲ့ မွေးစကလေး - သားဖွါးဆရာမများရဲ့အသည်းနှလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ အတွက် ဆောင်ပုဒ်ကတော့ The World Needs Midwives Today More Than Ever ကမ္ဘာကြီးက သားဖွါးဆရာမတွေကို အရင်ကထက်ပိုပြီး လိုအပ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုနေ့ရက်သတ်မှတ်ကျင်းပရတဲ့ အယူအဆသစ်ကို ၁၉၈၇ နယ်သာလင်မှာကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတကာ သားဖွါးဆရာမများ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကနေစတင်ခဲ့တာပါ။ ၅-၅-၁၉၉၁ နေ့ကစတင်ကျင်းပလာခဲ့ပြီး၊ အခုဆိုရင် နိုင်ငံပေါင်း (၅၀) ကျော်မှာ ကျင်းပကြပါတယ်။ ကျင်းပပုံနည်းလမ်းတွေ အမျိုးမျိုးကိုအကြံပေးထားပြီး ဆိုင်ရာနေရာဒေသနဲ့ကိုက်ညီမှာကို ရွေးလုပ်ဆောင်ကြဘို့၊ တေးဂီတပြိုင်ပွဲ၊ ကာရာအိုကေဆိုပွဲ၊ စီတန်းလမ်းလျှောက်ပွဲ၊ ပြေးပွဲ၊ ဆိုင်ခန်း-ပြခန်းတွေ ဖွင့်ခြင်း၊ အခမ်းအနား-အစည်းအဝေးနဲ့ ဟောပြာပွဲတွေကျင်းပခြင်း၊ အစိုးရပိုင်နဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေကို ဖိတ်ကြားခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာကိုအသုံးပြုဘို့လည်း အကြံပေးထားပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်တို့ တွစ်တာတို့စတဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေကို
ဒေါက်တာသန်းထွန်းမှ လူထုဒေါ်အမာသို့ ပေးစာ
ဒေါက်တာသန်းထွန်းက ငါတယောက်တည်းကဘဲလို့ ရေးခဲ့တယ်။ (တစ်)ယောက်တည်းကပဲ မဟုတ်ပါ။ တကိုမလိုအပ်ပဲ တစ်မလုပ်။ မ နောက်က ဘဲလိုက်ဖေါ်မြူလာလည်း မဟုတ်ပါ။ ငါတယောက်တည်းကပဲ မဟုတ်။ ဒေါ်အမာကနေ ဒေါက်တာသန်းထွန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံဆီရေးတဲ့စာမှာ သင်းကြန်လို့ရေးထားတာ မှတ်သားစရာ။ ပုံတွေကို Ludu လူထုကြီးပွားရေးစာမျက်နှာကနေ ရယူပါတယ်။ ကျေးဇူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၀-၄-၂၀၁၇
May Day နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားနေ့ အမေရိကမှာ ဘာလို့မကျင်းပသလဲ
နှစ်တိုင်း မေလ (၁) နေ့မှာ ဒပ်ဗလင်ကနေ ဒက္ကား စသဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာမှာ International Workers Day နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားနေ့ ကျင်းပကြတယ်။ ချီတက်ပွဲတွေ၊ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲတွေ၊ အခမ်းအနားတွေ။ တချို့အလုပ်သမားတွေက အနားယူကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အမေရိကားမှာ မလုပ်ကြသလဲ။ ဝေါဟာရနှစ်လုံးတည်းပါ။ Anarchists မင်းမဲ့နဲ့ Communists ကွန်မြူနစ်ပါလို့ International Business Times မှာ (ကိုးလ် စထရင်ဂလာ) က ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို အမေရိကားပျောက်နေတာဟာ အလွန်အဆီအငေါ်မတည့်ပါ။ ဘာလို့လည်းတိုတော့ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားနေ့ ရယ်လို့ဖြစ်လာစေခဲ့တာက အမေရိကားမှဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၈၆ (သီပေါမင်းပါတော်မူပြီးနောက် ၆ လ) မှာ ချီကာဂို အလုပ်သမားတွေအများကြီးဟာ အလုပ်ခွင်ကနေထွက်ပြီး တနေ့ (၈) နာရီသာအလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။ ဒိနောက်မကြာခင်မှာ Haymarket Square (ဟေးမားကက် စကွဲယား) လူစုလူဝေးထဲ ဗုံးခွဲလို့ ၁၁ ယောက်သေပါတယ်။ ရဲ ၇ ယောက်ပါတယ်။ မင်းမဲ့ဝါဒီ (၄) ယောက်ကြိုးပေးခံရတယ်။ သက်သေမခိုင်လုံပါ။ နောက်နှစ်အနည်းငယ်မှာတော့ ဥရောပမှာ အသစ်ဖွဲ့ထားကြတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်နဲ့ အလုပ်သမားပါတီတွေကနေ မေလ (၁) ရက်နေ့ကို အလုပ်သမားနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ တောင်
ပီ ပြီ ပြီး
Puppy ပါပီ 1. ၂၅နစ်ပါ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ် ဆရာ ကျမ ကလေးပျက်ကျ ထားလို့ သားအိမ်ထဲပစ္စည်းထည့်ထား ပါတယ်ဆရာ 2နစ်ကျော် ပါပီထည့်ထားတာ ရာသီကပုံမှန်လာပ်တယ် ဒီလမှာ ၂ဝရက်ကျော်မှ ထပ်လာပီး သွေးညစ်ညစ် တွေဆင်းလို့ပါ (ဘာကြောင့်လဲ မသိသေး။ ပါပီဆိုတာ ခွေးကလေး။) 2. 2နစ်ကျော် ပါပီထည့်ထားတာ ပစ္စည်းပါဆရာ သားအိမ်ထဲထည့် ထားတာပြောတာပါ 3. Share ပါပီ ဆရာ (ရှယ်ပါပြီလို့ ရေးရတယ်။ ပါပီ = ခွေးကလေး။) 4. ကျတော့်ကလေးက ၉လ ရှိပါပီ ဝမ်းသွားတာ ၅ရက်ရှိပါပီ အန်လည်း အန်ပါတယ် အန်တာတော့ ပြောက်ပါပီ ပီးတော့ ကလေးက နို့လည်း သိပ်မသောက်ဘူး ပိန်လာပီး ကလေးတွက် ဝမ်းသွားနေချိန်မှာ အားဆေး တခုခုတိုက်ချင်ရင် ဘာဆေးတိုက်ရမလဲဆရာ ကလေးက နို့သောက်တာလည်း အရမ်းနည်းသွားတယ် ပိန်လည်းပိန်နေပါပီ 5. ကျွန်းသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စားပွဲတင် ဝတ်ရွတ်ခေါက်ခုံလေးများရရှိပါပီရှင် 6. ကျေးဇူးပါဆရာ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိနဲ့ ဘာရောဂါဖစ်လဲ နီးစပ်ရာဆေးခန်းတေမှာပြလို့ရလား ဆရာ ဒီပြင့်ရောဂါတေကြောင့်ရော ရာသီနောက်ကျတက်ပါလားဆရာ 7. ဆရာ ကျတော့ကလေးက ၉လ ရှိပါပီ ဝမ်းသွားတာ ၅ရက်ရှိပါပီ အန်လည်း အန်ပါတယ် အန်တာတော့ ပြောက်ပါပီ ပီးတော့ ကလေးက နို့လည်း သိပ်မသောက်ဘူး ပိန်လာပီး ကလေးတွက်
မန်လည်ဆရာတော်သည် ၁၂ နှစ်သား အရွယ်က ကျောင်းမှာနေခဲ့သည်။ တနှစ်အတွင်းမှာ ပရိတ်ကြီးကို နှုတ်တက်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့မှ နေမိဇာတ်ကို သင်ကြားရာ မဃဒေဝမင်း တော်ထွက်ခြင်းအကြောင်းကို သဒ္ဓါမြူး ကြည်နူးခဲ့သည်။ (ဦးသော်ဇင်ရေးသားတဲ့ မဃဒေဝအဘိဓာန်) မဃဒေဝလင်္ကာသစ်ကျမ်းကြီးကို ပြုစုခဲ့သည်။ မဃဒေဝအဘိဓာန် ရှေးက စကားပုံရှိသည် - လူမိုက်တသောင်း၊ ကဲ့ရဲ့ရှောင်းလည်း လူကောင်းတယောက်၊ ခြီးမွမ်းပျောက်၏။ လူမိုက်တသောင်း၊ ခြီးမွမ်းရှောင်းလည်း လူကောင်းတယောက်၊ ပြစ်တင်ကြောက်လော့။ သူသည် သူယုတ်တို့ ပြစ်တင်မှုကို လျစ်လှူရှုသော်လည်း သူကောင်းတယောက် ပြစ်တင်မှာကိုကား ကြောက်သည်။ စင်စစ်မှာမူ သူတော်ကောင်းတို့ အနေဖြင့်ကား အပြစ်မြင်ရန် ခက်သည်။ (မန်လည်ဆရာတော်) ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ငယ်ငယ်က ပူစီနံ၊ ပူစီနာလို့ အလွယ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ နယူးဒေလီရောက်မှ ပူဒီနာ အသံထွက်မှန်သိတယ်။ အိန္ဒိယမှာ Mentha arvensis, Mentha piperita နဲ့ Mentha spicata လို့ခေါ်ကြတယ်။ သူများတွေဆီမှာ ဆေးအဖြစ်သုံးကြတယ်။ ဟာဘယ်ဆေး ကျမ်းတွေမှာ အက်စစ်များတာ၊ လေအောင့်တာ၊ လေတက်တာအတွက် ညွှန်းတယ်။ IBS ခေါ် ဝမ်းမငြိမ်ရောဂါအတွက်လည်း ညွှန်းတယ်။ Spearmint oil ဆိုတာလည်း အဲတာကို အဆီထုတ်ထားတာ။ အနံ့က သိသာတယ်။ Antioxidants အင်တိုင်ကောက်ဆီဒင့်ဓါတ်ပါတယ်။ မကောင်းတာတွေကိုချေဖျက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ Peppermint နဲ့ Mint ခေါ် အနံ့ဆိုးသက်ဆေးအဖြစ်သုံးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စမူဆာနဲ့တွဲစားတယ်။ ဆိတ်သားကင်သုပ်ထဲထည့်စားတယ်။ ဒံပေါက်နဲ့စားကြတယ်။ အိမ်မှာတော့ စားချင်တဲ့အခါ စားရအောင် စိုက်တာ။ စမူဆာနဲ့ ဆိတ်သားကင်သုပ်။ ဘယ်တော့လုပ်မလဲ မသိ။ ကျွန်တော်က စမူဆာကို မြန်မာပြည်ကလိုကြော်တာ၊ သုပ်တာသာကြိုက်တယ်။ မဒရပ်စ်မှာ မြန်မာပြည်နဲ့ အတူတူ။ ကျွန်တော်တို့က သူတို့သွားတူတာ။ ဗမာတချို့က စမူဆာထဲမှာ မဆိုင်တာတွေထည့်ကြတာ မကြိုက်ပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
1. Female ပါ အပျိူပါ ရာသီက ပုံမှန်ပါပဲရှင့် ဖြစ်နေတာက မျက်လုံးတွေက ယားတော့ လက်နဲ့ပွတ်ပါတယ် လက်နဲ့ ပွတ်ပါများတော့ မျက်လုံးတေကပူပြီး မျက်လုံးကနီပြီးဝါလာပါတယ် မျက်ရည်ပူတေလည်း ကျပါတယ် 2. ကင်ဆာ ဖြစ်ထားတဲ့သူနဲ့ alcohol နဲ့ တည့်လားရှင့် အမြဲတန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင့် အလုပ်ကလူကြီးတေနဲ့ ဆုံမဲ့အချိန်တေမှပါရှင့် ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးကြပါဦးရှင့် (ကျွန်တော့်ကိုမေးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ သတ်ပုံကို တင်ပြချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ တေ မဟုတ် တွေ လို့ရေးရ။) 3. ကင်ဆာသမားတေစိတ်ဓာတ်နှင့်စိုးရိမ်မှုကအဓိကပါရှင့် စိတ်ဓာတ်မကျနဲစိုးရိမ်စိတ်မများနဲ ညီမအသက်၃၈ပါ 4. ကျနော့်အသက် ၂ရပါ ဆံပင်တွေကျွတ်တာ နဖူးတောင်ပြောင်လာပါပြီဆရာ ဆံပင်ဆေးဆရာဝန်တေနဲ့ ဆွေးနွေးတာ ဟော်မုန်းကြောင့်တဲ့ပြောတယ်ဆရာ ဟော်မုန်းဓာတ်မညီတာဆိုတာဘာပါလဲဆရာ ပြီးတော့ ကျနော် လည်ချောင်းတေလဲ တအားပူပြီး မူးတတ်တာရော ဟော်မုန်းနဲ့ဆိုင်ပါသလားဆရာ ဘာဆေးသောက်ရင် အထောက်ကူပြုနိုင်ပါလဲဆရာ ကျနော်က နယ်ဘက်ကပါ ဆရာ ကျနော့်မှာ မေမေပဲရှိပါတော့တယ် မေမေကလဲ ကင်ဆာနဲ့ပါ ဆံပင်တေကျွတ်တော့ ဆရာဝန်တေနဲ့ ဆွေးနွေးတာ ကုရင် တအားစျေးနှုန်းတေများလို့ပါဆရာ (တေ ရေးတာမှားနေတယ်။) 5. ကျနော် goitre ဖြစ်နေတယ